Urolithin A budada ugu fiican (1143-70-0) - Soo saare & warshad
Cofttek waa soo saaraha budada Urolithin A ugu fiican Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah oo ah 400kg.
Urolithin A Tilmaamaha budada
Name: Urolitin A
Magaca kiimikada: 3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-kow
Caanaha Kiimikada: C13H8O4
Miisaankani waa: 228.2
Color: Caddaan cad-cad oo budada ah
Keydka InChi: RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
NOLOSHADA SMILES: O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=C(O1)C=C(O)C=C3
function: Urolithin A, oo ah dheef-shiid kiimikaad-microbial-ka ah ee aaladda lulagic acid, wuxuu la dagaallamaa anti-bararka, antiproliferative, iyo guryaha antioxidant-ka. Urolithin A ayaa kadhigaysa is-beddel iyo isku-shaandhayn, waxay joojisaa horumarka wareegga unugyada, waxayna xannibtaa isu-imaatinka DNA.
Codsiga: Urolithin A waa dheef-shiid kiimikaad leh ellagitannin; Farmashiyeyaasha Daawada
Xalka: Dhibaatada DMSO (3 mg / mL).
Urolitin A Spectrum NMR
Urolithin A faa'iidooyinka
(1) Wuxuu dheereyn karaa cimrigaaga
Urolithin A wuxuu curyaamiyaa cudurka mitophagy adoo si taxaddar leh u tirtiraya mitochondria dhaawacmay. Tani waxay sidoo kale hubineysaa dib u warshadaynta cudurka 'mitochondria' oo sifiican u shaqeynaya. Mitochondria badanaa waxay ku dhacdaa da'da iyo sidoo kale walaaca. Ka takhalusida cudurka mitochondria ee doorka leh ayaa door ka ciyaara fidinta cimrigaaga.
Daraasad lagu sameeyay Gooryaanka, urolithin Dheeraad ah oo lagu maareeyo 50 µM laga bilaabo heerka ukunta illaa geerida ayaa la ogaaday inay cimri dheereyso 45.4%.
Daraasad kale oo lagu sameeyay 2019 iyada oo la adeegsanayo dareemayaasha fibroblasts ee bini-aadamka, urolithin A supplement ayaa lagu ogaadey inay muujineyso kartida gabowga Waxay awood u yeelatay inay kordhiso muujinta koolajka nooca 1 iyo sidoo kale inay yareyso muujinta matxafka metalloproteinase 1
Daraasad bini aadam ah oo yar ayaa sidoo kale muujisay in UA ay awood u yeelatay inay hagaajiso shaqada mitochondrial iyo caafimaadka qalfoofka ee dadka waayeelka ah markii afka laga qaado 500-1000mg muddo afar toddobaad ah.
(2) Caawinta kahortaga kansarka qanjirka 'prostate'
Daawada urolithins-ka iyo jiritaankooda, ellagitannins, waxay leeyihiin astaamaha anti-kansarka. Waxay awoodaan inay horjoogsadaan fiditaanka unugyada kansarka iyadoo loo marayo xarigga unugyada iyo soo saarista apoptosis. Apoptosis (Apoptosis) waxaa loola jeedaa dhimashada unugyada ee barnaamijku uu ku baabi'inayo unugyada kansarka ee suurtagalka ah iyo sidoo kale unugyada kale ee cudurka qaba.
Daraasad lagu sameeyay jiirarka jiirka ee lagu duray unugyada kansarka bini aadamka, ellagitannins metabolites (Urolithin A) ayaa la helay inay xakameyso koritaanka kansarka qanjirka 'prostate'. Daraasadda ayaa sii werisay inay ku badan tahay dheef-shiid kiimikaadka qanjirka 'prostate', unugyada xiidmaha iyo unugyada xiidmaha.
(3) Kordhinta garashada
Urolithin A wuxuu awoodaa inuu ka difaaco neerfayaasha dhimashada wuxuuna sidoo kale kicin karaa neurogenesis iyada oo loo marayo calaamadaha anti-bararka.
Daraasad ku saabsan jiirarka oo leh cillada naafanimada, urolithin A waxaa laga helay inay ka adkaato cillada garashada iyo ka ilaaliso neerfayaasha apoptosis. Tani waxay soo jeedineysaa in UA loo isticmaali karo daaweynta cudurka Alzheimers (AD).
(4) Awoodda buurnida
Daraasad la sameeyay ayaa muujisay in ellagitannins ay awood u leedahay inay horjoogsato kororka isku-darka xirmooyinka iyo sidoo kale astaamaha adipogenic sida borotiinka jawaabta korniinka hore 2 iyo sidoo kale borotiinka-isku xidha unugyada wareegga unugyada.
Urolithin A ayaa si gaar ah loo helay si loo wanaajiyo xasaasiga insulin sidaas darteed waxay ka hortageysaa horumarinta buurnaanta.
Daraasad lagu sameeyay jiirarka buurnida ee qofku buko, urolithin Dheeraad ah ayaa la helay si looga hortago buurnida ay cuntadu keento iyo culayska dheef-shiid kiimikaadka ee jiirka. Daraasadu waxay muujisay in daaweynta UA ay kordhisay kharashaadka tamarta sidaas darteed tiro jirka ka hooseysa.